Maxaa Kala Qabsaday Arsene Wenger & Ronald Koeman Kadib Dhamaadkii Ciyaartii Barabaraha Ku Dhamaatay Ee Ka Dhacday Emirates Stadium
Arsene Wenger iyo Ronald Koeman ayaa hadalo kulul isku adeegsaday intii lagu sii socday tunel-ka kadib dhamaadkii ciyaartii ay barbaraha gool la’aanta ah galeen labada kooxood ee Arsenl iyo Southampton sida ay qortay majaladda Mirror.
Arsenal ayaa loo dhaadhiciyay kaalinta afaraad ee horyaalka iyadoo aan wax guul ah gaarin afartii kulan ee ugu dambeysay, Wenger ayaana wajahay garsoore Lee Mason iyo garsooraha afaraad ee Graig Pawson kadib dhamadkii ciyaarta.
Arsene Wenger ayaa eedeeyay labadaan nin isagoo ku yiri: “Mar walba isku mid ayaad tahiin”
Koeman ayaa lagu soo waramayaa inuu arkay hadalada uu Wengr ku tuuray garsoorka wuxuuna ugu jawaabay: “Mar walba isku mid ayaad ii tahiin! waxaad heshay 10-fursad oo aad gool ku dhalin kartay, waxna kama aadan keenin, sidaas darteed maxaad u abaareysaa ayaga”
Macalinka reer Holland ee leyliya Southampton ayaa ku duray hadalkaas Wenger iyadoo macalinka reer France uu caro ka qaaday hadalka dhigiisa iyo go’aanada garsoorka kulankii xalay.
Dhanka kale Wenger oo ka hadlaya kulanka ayaa yiri: “Waxey aheyd jahawareerka ugu badan, marka aad qiimeyso tayada fursadaha aad abuurtay, iyo tayada dhameystirkaaga”
“Tayada fursadaha aan abuurnay maanta [Xalay] marka loo eego EPL-ka waa mid sare, balse tayada dhameystirka waxey aheyd mid liidata, kala duwanaashaha labadaas waxaa si fiican kugu sharaxaya natiijada (0-0)” ayuu Wenger yiri isagoo wiilashiisa ku eedeynaya ineysan ka faa’ideysan fursadahooda.
Jamie Vardy Waa Dilaaga Horyaalka Premier League Kaliya Hal Gool Ayuuna Ka Hooseeyaa Mashiinda La Liga Suarez & CR7
Hadal heynta ugu badan goobaha lagu falanqeeyo kubada cagta waa dar-darta Jamie Vardy iyo kooxdiisa Leicester City kuwaas oo maja-xaabiyay kooxda Liverpool oo uu maamulo macalin aan fariisan sagaashanka daqiiqo.
Leicester City ayaa cadeysay hamigeeda xagaagan markii ay 2-0 dirtay Reds kulan ka dhacay garoonka King Power Stadium waxeyna aheyd habeen u qaas ah wiilka kasoo hilaacay xagaagan EPL-ka ee Jamie Vardy kaas oo dhaliyay labada gool ee kooxdiisa waxeyna u ahaayeen kuwii 17 iyo 18-aad ee xagaagan uu dhaliyo.
Labadii gool oo uu taabsiiyay shabaqa Simon Mignolet ayaa keentay inuu ku dhawaado mashiinada horyaalka La Liga ee Suarez iyo Cristiano Ronaldo kuwaas oo min 19-gool dhaliyay xagaagan kulamada horyaalka waxuuna kaliya ka hooseyaa hal gool marka ay noqoto in loo tartamo kabta dahabka gooldhalinta yurub.
Goolkii koowaad oo uu Jamie Vardy xalay ka dhaliyay Liverpool kaas oo ahaa kubada la yiraahdo “Volley” dhul ma dhacdo ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee xagaagan uu xidigaan ka dhaliyo meel ka baxsan xerada ganaaxa taasoo cadeyneysa inuu yahay wiilkaan mid goolashiisa ku dhex dhaliya isagoo ku jira xerada.
Jamie Vardy waa gooldhaliyaha ugu sareeya horyaalka Ingiriiska isagoo ku hogaaminaya 18-gool, haatan Leicester City waxey 3-dhibcood ku horkaceysaa horyaalka iyadoo leh 50-dhibcodo, halka City oo kusoo xigtana ay leedahay 47-dhibcood
Twitter-ka Jamaahiirta Chelsea Ee Nigeria Oo Ku Maadeystay Arsenal: “Cid Idinkula Tartami Karta Ma Jirto Koobkiina”
Arsenal ayaan guul gaarin afartii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka taasoo ka dhaadhicisay kaalinta afaraad ee horyaalka, waxaana fikirkooda uu saxiix noqon rabaa dadka aaminsan in Arsenal ay mar walba difaacato booskeeda, inkastoo kooxda Wenger ay wali tahay koox adag oo wax walba laga filan karo.
Kadib barbarahii ay la gashay xalay Southampton kulan ka dhacay Emirates Stadium waxey keentay iney farqiga goolasha kaalinta sadexaad kaga gasho kooxda ay xifaaltamaan ee Tottenham Hotspur oo iyaguna guul qurux badan ka gaartay Norwich City.
Page-ka taageerayaasha Chelsea ee ku sugan dalka Nigeria ayaa dhulka la galay Arsenal iyagoo soo dhigay sawir maad ah oo ay ku leeyahiin.
“Taageerayaasha Arsenal is dajiya, Ma jirto qof idinkula tartami karta koobkiina” Iyagoo kala jeeda booska afaraad ee horyaalka, waxaana aan dhamaan doonin cadaawada ka dhaxeysa labada kooxood.